के तपाईंलाई थाहा छ कति हा’इट भएको मानिसको तौ’ल कति हुनु पर्छ ? जानी राखौँ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/के तपाईंलाई थाहा छ कति हा’इट भएको मानिसको तौ’ल कति हुनु पर्छ ? जानी राखौँ
के तपाईंलाई थाहा छ कति हा’इट भएको मानिसको तौ’ल कति हुनु पर्छ ? जानी राखौँ
मानिसको तौ’ल कति हुनुपर्छ ? यसको जवाफ उक्त व्यक्तिको उ’चाई र शा’रीरिक ब’नौटलाई आधार मानेर दिन सकिन्छ । तौ’ल बढी हुनु वा घ’टी हुनु भनेको शा’रीरिक स’मस्या हो । अ’स्वभाविक तौ’ल बढी हुनुले विभिन्न रो’ग नि’म्त्याउँछ । शरी’र भ’द्दा देखिन्छ । खानपान, जीवनशैली, ह’र्मोनल परिवर्तन जस्ता थुप्रै कारणले तौ’ल बढ्छ । अ’स्वभाविक रुपमा कम तौ’ल हुनु पनि ठीक होइन । यद्यपी हामीलाई थाहा हुँदैन, आफ्नो तौ’ल कति हुनुपर्छ ? <strong>मो’टोपन जाँच्ने सर्वमान्य मानक</strong> श’रीरको तौ’ल बढी हुनु र कम हुनु दुबै रो’गको संकेत हो । त्यसैले आफ्नो तौ’लबारे जानकार हुनुपर्छ । यसका लागि सहि तरिका हो, बि’एमआई अर्थात ब’डी मा’स इ’न्डेक्स । यो मो’टोपन जाँच्ने सर्वमान्य मा’नक हो
।<strong>यसरी जाँच्ने ?</strong> हाम्रो श’रीरको लम्बाई र तौ’लको हिसाब बि’एमअईबाट निकाल्न सकिन्छ । तपाईले आफ्नो श’रीरको ल’म्बाई से’न्टिमिटरमा नाप्नुपर्छ । र, त्यसमा १ सय घ’टाउनुपर्छ । जस्तो कि, तपाईको श’रीरको ल’म्बाई ५ फिट दशमलव ५ इ’न्च छ भने तपाईको से’न्टिमिटरमा यो एक सय ७० सेन्टिमिटर हो । अब यसबाट १०० घ’टाइदिने हो भने, बाँकी ७० रहन्छ । अतः तपाईको उचाई ५ फिट ५ इ’न्चको छ भने, तौ’ल ७० केजी हुनुपर्छ । यो भन्दा कम वा बढी तौ’ल सहि हुन्न । हाम्रो औसत उचाई पाँच फि’ट भन्दा माथि हुन्छ । पाँच फि’ट उचाई भएको मानिसको तौ’ल ५० देखि ५४ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट १ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौल ५१ देखि ५५ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट २ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ५६ देखि ६० केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ३ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ५७ देखि ६१ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ४ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ५८ देखि ६३ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ५ इन्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६० देखि ६५ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ६ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६१ देखि ६६ के’जीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ७ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६४ देखि ६९ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ८ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६५ देखि ७० केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ९ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६७ देखि ७२ केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७३ देखि ७८ केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट १ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७३ देखि ८० केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट २ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७७ देखि ८३ केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट ३ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७९ देखि ८५ के’जीसम्म सामन्य हो ।
<strong>खतरानक अवस्था</strong> सामन्य भन्दा बढी तौल हुनु भनेको श’रीरमा रो’गको संभावना बढ्नु पनि हो । त्यसैले सकेसम्म तौ’ललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । असामन्य मा’टोपनले म’धुमेह, उच्च र’क्तचाप लगायत हृ’दय रो’गको ख’तरा बढाउँछ । <strong>कसरी बढ्छ मो’टोपन</strong> मा’टोपन बढ्नुको केहि कारण छन् । एक त हाम्रो जीवनशैली पनि मो’टोपन बढ्नुमा जिम्मेवार हुन्छ । अस्तव्यस्त जीवनशैलीको कारण श’रीरमा बो’सोको मात्रा बढ्छ । त्यस्तै जथाभावी र अनियन्त्रित खानपानले पनि मो’टोपन बढ्छ । कतिपय ह’र्मोनल परिवर्तनको कारणले समेत श’रीरमा अस्वभाविक मो’टोपन बढ्ने वा घ’ट्ने हुन्छ । यसबाहेक बं’शानुगत कारणले मो’टोपन बढ्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।
सामन्य हिसाबले हेर्दा, हामी खानाको रुपमा जति क्या’लोरी लिन्छौं, त्यस अनुरुप खर्च गरिएन भने तौ’ल बढ्छ । १. श’रीरलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी खानेकुराको से’वन २. निस्क्रिय जीवनशैली ३. बं’शानुगत कारण ४. कतिपय अवस्थामा म’नोवैज्ञानिक कारणले पनि मो’टोपन बढ्छ ५. ग’र्भावस्थामा तौल बढ्न सक्छ । ६. केहि यस्ता औ’षधी हुन्छ, जसले मो’टोपन बढ्छ <strong>कसरी घ’टाउने तौल ?</strong> तौ’ल घ’टाउनका लागि धेरैले खानपानमा क’टौती गर्छन् । तर, यो सहि तरिका होइन । खानपानमा क’टौती गर्दा श’रीरलाई आवश्यक पो’षक त’त्वको अभाव हुन्छ । परिणमतः त्यसले रो’ग निम्त्या’उन सक्छ । १. तौ’ल घ’टाउनका लागि आफ्नो जी’वनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
खाने, वस्ने, सुत्ने समय नियमित हुनुपर्छ । शा’रीरिक क्रि’यामा जोड दिनुपर्छ । सधै सक्रिय र फुर्तिलो हुनुपर्छ । २. खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकै पटकमा धेरै खाना खानु हुँदैन । सकेसम्म हल्का र सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । ता’रेको, भु’टेको, म’सलेदार, वो’सोयुक्त खानेकुराले पनि तौ’ल बढाउँछ । ३. एकै स्थानमा लामो समय बस्ने, भोक लागेपछि एकैपटक धेरै खाने बानी त्याग्नुपर्छ । कार्यलयमा होस् वा घरमा, यताउता हिँड्ने, सानोतिने शा’रीरिक काम गर्ने गर्नुपर्छ । ४. तौ’ल सन्तुलित राख्ने राम्रो काइदा हो, व्या’याम । नियमित रुपमा व्या’याम, योगा गर्दा पनि तौ’ल बढ्दैन । ५. सकेसम्म दिनभर पैदल हिँड्ने बानी गरौं । छोटो यात्रा गर्नुपरे पनि गाडी, मोटरसाइकल चढ्ने बानी त्याग्नुपर्छ । ६. राती खाना खानसाथ सुत्नु हुँदैन । खाना र सुत्ने समयवीच कम्तीमा तीन घ’ण्टाको अन्तर हुनुपर्छ । ७. टेलिभिजन हेर्दे, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल चलाउँदै स्न्या’क्स खाने बानी त्यागौं ।